Kuvimba naMwari kubvira paudiki (5)
“Kana simba rangu rapera” (9)
‘Mwari akandidzidzisa kubvira ndichiri mudiki’ (17)
71 Haiwa Jehovha, ndakapotera kwamuri. Ngandirege kumbonyadziswa.+ 2 Ndiponesei mukururama kwenyu mundinunure. Rerekerai nzeve yenyu kwandiri* mundiponese.+ 3 Ivai nhare yangu yematomboMandinogara ndichipinda. Rayirai kuti ndiponeswe,Nekuti muri ibwe rangu nenhare yangu.+ 4 Mwari wangu, ndinunureiwo paruoko rwemunhu akaipa,+Paruoko rwemudzvinyiriri asingatongi zvakarurama. 5 Nekuti muri tariro yangu, haiwa Changamire Ishe Jehovha;Ndagara ndichivimba nemi kubvira ndichiri mudiki.+ 6 Ndaivimba nemi kubvira ndichizvarwa;Ndimi makandibudisa mudumbu raamai vangu.+ Ndinoramba ndichikurumbidzai. 7 Ndaita sechishamiso kuvanhu vazhinji,Asi imi muri nzvimbo yangu yekupotera yakasimba. 8 Muromo wangu uzere nekukurumbidzai;+Ndinoswera ndichitaura nezvekubwinya kwenyu. 9 Musandirasa pandinenge ndakwegura;+Musandisiya kana simba rangu rapera.+ 10 Vavengi vangu vanotaura zvakaipa nezvangu,Uye vaya vari kutsvaga kupfuudza upenyu hwangu* vanorangana+ 11 Vachiti: “Mwari akamusiya. Mudzingirirei mumubate, nekuti hapana achamuponesa.”+ 12 Haiwa Mwari, musaramba muri kure neni. Haiwa Mwari wangu, kurumidzai kuzondibatsira.+ 13 Vaya vari kupikisana neni*Ngavanyadziswe, vaparare.+ Vaya vari kutsvaga kundipinza mudambudzikoNgavafukidzwe nekuzvidzwa uye kunyadziswa.+ 14 Asi kana ndiri ini ndicharamba ndakamirira;Ndichawedzera kukurumbidzai. 15 Muromo wangu ucharondedzera kururama kwenyu,+Uchaswera uchirondedzera mabasa enyu ekuponesa,Kunyange zvazvo akawanda chaizvo zvekuti handikwanisi kuaverenga.+ 16 Ndichauya ndozotaura nezvemabasa enyu esimba,Haiwa Changamire Ishe Jehovha;Ndichataura nezvekururama kwenyu, kwenyu imi mega. 17 Haiwa Mwari, makandidzidzisa kubvira ndichiri mudiki,+Uye nanhasi ndichiri kuzivisa mabasa enyu anoshamisa.+ 18 Kunyange ndakwegura uye ndachena musoro, haiwa Mwari, musandisiya.+ Regai ndiudze chizvarwa chinotevera nezvesimba renyu*Uye vese vachauya nezveukuru hwenyu.+ 19 Kururama kwenyu haiwa Mwari kunosvika kumusoro;+Makaita zvinhu zvikuru;Haiwa Mwari, ndiani akaita semi?+ 20 Kunyange zvazvo makaita kuti ndisangane nematambudziko akawanda nenhamo,+Ndimutsidzirei zvakare;Ndibudisei pasi pasi penyika.*+ 21 Wedzeraiwo ukuru hwanguUye ndikomberedzei mundinyaradze. 22 Ndichabva ndakurumbidzai nechiridzwa chine tamboNekuda kwekutendeka kwenyu haiwa Mwari wangu.+ Ndichaimba ndichikurumbidzai nerudimbwa,*Haiwa imi Mutsvene waIsraeri. 23 Miromo yangu ichashevedzera nemufaro ndichiimba ndichikurumbidzai,+Nekuti makandiponesa.*+ 24 Rurimi rwangu ruchaswera ruchitaura* nezvekururama kwenyu,+Nekuti vaya vari kutsvaga kundiparadza vachashaya pekupinda uye vachanyadziswa.+
^ Kana kuti “nemweya wangu.”
^ ChiHeb., “nezveruoko rwenyu.”
^ Kana kuti “mumvura yakadzika yenyika.”
^ Kana kuti “Ndichakuridzirai rudimbwa.”
^ Kana kuti “makadzikinura mweya wangu.”
^ Kana kuti “ruchifungisisa.”